အိုမင်းခြင်းကိုကာကွယ်ခြင်း အိုမင်းခြင်းကိုကာကွယ်ခြင်း မှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊
NEW WEI-LIN ENTERPRISE CO., LTD. ဦးဆောင်သည် Taiwan ၏ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့ အိုမင်းခြင်းကိုကာကွယ်ခြင်းနိုင်ငံတကာအရည်အသွေးစံနှုန်းများကိုပံ့ပိုးမှုများပိုမိုလိုအပ်လျက်ရှိကြောင်းအတွက်တီထွင်သော။ ကျွန်တော်တို့ဟာအကောင်းဆုံး efficiency နဲ့ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များရှည်လျားနောက်ဆုံးရေရှည်တည်တံ့သောစွမ်းရည်နှင့်အတူဖောက်သည်များစိတ်ကျေနပ်စေကြောင့်လူသိများကြသည်။ တစ်ခုလုံးကိုဆွဲဆောင်မှုအကွာအဝေးယှဉ်ပြိုင်မှုဈေးကွက်ဈေးနှုန်းမှာငါတို့ထံမှ availed နိုင်ပါသည်။ သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းများကိုသို့မဟုတ်အကြံပြုချက်များရှိပါကဆက်သွယ်ပါရန်တွန့်ဆုတ်မသွားပါ။
အထူး milky မျက်နှာဖုံးသည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်ပြည့်စုံသည်.နို့ရေချိုးခံစားပြီးနောက်,၎င်းသည် elastic ဖြစ်သောအံ့သြဖွယ်ထိတွေ့မှုရှိသည်,နူးညံ့သိမ်မွေ့,တောက်ပ,စေးနှင့်ချောမွေ့.
ထူထဲသောချုံ့နည်းလမ်း:၁၀ ကြိမ် နှိပ်၍ ၁၅ မျက်နှာလုံးလုံးထူသောအလွှာကိုသုံးပါ-မိနစ် ၃၀.အရေပြားခိုင်မာတဲ့ခံစားရတဲ့အခါ,ရေနှင့်ဆေးပါ.
ရောစပ်နည်းလမ်း:သင်၏လက်ဖဝါးပေါ် ၃ ကြိမ်နှိပ်ပါ,ထို့နောက် VSK တဆေး Micron Water Essence ၏ ၃ ချပ်ကိုထည့်ပါ,နှစ်ခုကိုသင်၏လက်ချောင်းထိပ်များနှင့်အညီအမျှရောစပ်ပါ,မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးကိုအဝတ်လျှော်ခြင်းမရှိဘဲလိမ်းပါ.၃.အိပ်ရာမဝင်မှီညအချိန်တွင်တစ်ကြိမ်နှိပ်ပါ,ဝက်ခြံပေါ်ရှိပေါ့ပေါ့တန်တန်ထိပုတ်ပါ,နှင့်ဝက်ခြံtheရိယာ၏အရွယ်အစားတစ်ဝါဂွမ်း pad ပါအတူဖုံးလွှမ်းထားသည်.နောက်တစ်နေ့တွင်ဆေးကြောပြီးသင်အံ့သြဖွယ်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကိုတွေ့လိမ့်မည်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.antiagingproducts.com.tw/my/anti-aging-care.html
အကောင်းဆုံး အိုမင်းခြင်းကိုကာကွယ်ခြင်း ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက် အိုမင်းခြင်းကိုကာကွယ်ခြင်း ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ အိုမင်းခြင်းကိုကာကွယ်ခြင်း ကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဝယ်ယူရန်အတွက်၊ Taiwan